ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ - Kdom
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Kdom မှစီမံထားသည်။ ဆိုက်တလျှောက်လုံး“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” နှင့်“ ငါတို့” ဟူသောဝေါဟာရများသည် Kdom ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှသတင်းအချက်အလက်၊ ကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကသင့်အားအသုံးပြုသူ၊ သင်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့စည်းကမ်းချက်များ၊ အခြေအနေများ၊ ပေါ်လစီများနှင့်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတစ်ခုခု ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ ၀ န်ဆောင်မှု” တွင်ပါ ၀ င်ပြီးထိုထပ်ဆောင်းစည်းကမ်းချက်များ၊ ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းနှင့် / သို့မဟုတ် hyperlink အားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ ရောင်းချသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ကုန်သည်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူများပါဝင်သူများအပါအဝင်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော site ၏အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သည်။
ကြှနျုပျတို့၏ website နှင့်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုမီဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ ထို site ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုရယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်, သင်ဝန်ဆောင်မှု၏ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။ သင်ဤသဘောတူညီချက်၏အပေါငျးတို့သသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများသဘောမတူဘူးလျှင်, သင် website ကိုဝင်ရောက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုငျသညျ။ ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, လက်ခံမှုဖော်ပြဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များအားကန့်သတ်ထားသည်။
လက်ရှိစတိုးဆိုင်မှဆက်ပြောသည်ထားတဲ့မဆို features အသစ်သို့မဟုတ် tools တွေကိုလည်း of Service ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင် of Service ကိုသတ်မှတ်ချက်များအရှိဆုံးလက်ရှိ version ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ updates များကိုနှင့် / သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများပို့စ်တင်အသုံးပြုပုံကို update ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုအစိတ်အပိုင်းကိုအစားထိုးခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများများအတွက်အခါအားလျော်စွာဒီစာမျက်နှာစစ်ဆေးရန်သင်၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကို၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် website ကိုဝင်ရောက်ခွင့်သူတို့အားအပြောင်းအလဲများလက်ခံမှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းဖို့ခွင့်ပြုသောအွန်လိုင်း E-Commerce ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး Shopify Inc ကိုပေါ်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း 1 - အွန်လိုင်းစတိုး TERMS
Service ကိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်သင်နေထိုင်ရာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစု၏အနည်းဆုံးအသက်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားပြု, သို့မဟုတ်သင်နေထိုင်ရာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစု၏အရွယ်များမှာနှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီကြောင်း သင့်ရဲ့အသေးအဖွဲမှီခိုမဆိုဒီ site ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါ။
သင်သည်မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုစေခြင်းငှါမ may, ထိုဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုအတွက်, (အပါအဝင်သော်လည်းမမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအကန့်သတ်ထား) သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်မည်သည့်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်။
သင်သည်မည်သည့် worms ဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဖျက်သဘောသဘာမဆို code ကိုထုတ်လွှင့်မထားရပါ။
အပိုင်း2- အထွေထွေအခြေအနေများ
သငျသညျ (ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်မဟုတ်) သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို, စာဝှက်မထားတဲ့လွှဲပြောင်းမည်အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်များကျော် (က) transmission ကိုပါဝင်; နှင့် (ခ) ညီနှင့်ချိတ်ဆက်ကွန်ယက်များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်များအမြဲကွန်ရက်များကျော်လွှဲပြောင်းစဉ်အတွင်း encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုကရေးသားခွင့်ပြုချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ, သင်, မျိုးပွားပွား, မိတ္တူ, ရောင်းချ, လုပ်ငန်းမဆိုအဘို့ကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ် exploit, ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးသောမှတဆင့် website တွင်မဆိုထိတွေ့ရန်လက်လှမ်းမီဖို့မသဘောတူ ။
အပိုင်း3- သတင်းအချက်အလက်တိကျ, ပြည့်စုံအချိန်မီ
ဒီ site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်လုပ်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသို့မဟုတ်လက်ရှိမပါလျှင်ကျနော်တို့တာဝန်မယူဖြစ်ကြသည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်အဆိုပါပစ္စည်းကိုသာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်နှင့်အပျေါမှီခိုသို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏မူလတန်း, ပိုမိုတိကျမှန်ကန်, ပိုမိုပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိန်မီသတင်းရပ်ကွက်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချများအတွက်တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။ ဒီ site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းအပေါ်မဆိုအားကိုးသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤ site အချို့သောသမိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဆံ့နိုငျသညျ။ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်, သေချာပေါက်လက်ရှိမဟုတ်ပါဘူးနှင့်သာသင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းပေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဒီ site ရဲ့ contents ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အခွင့်အရေးချန်ထားသော, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို update ရန်မတာဝန်ရှိသည်။ သင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်ရန်သင်၏တာဝန်ကြောင်းသဘောတူသည်။
အပိုင်း4- THE ဝန်ဆောင်မှုပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်စျေးနှုန်း
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသိပေးစာမပါဘဲဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ် သိ. ဆိုအစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ) ကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်းမှမည်သည့်အချိန်တွင်ညာဘက်ကိုချန်။
ငါတို့သည်သင်တို့သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံ, စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှု, ရပ်ဆိုင်းမှုသို့မဟုတ်ရပ်စဲဘို့မဆို Third-party ဖို့ထိုက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
အပိုင်း5- ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု (ရှိလျှင်)
အခြို့သောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကို website မှတဆင့်သီးသန့်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကန့်သတ်ပမာဏရှိသည်နှင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့သို့ပြန်သွားသည်မူဝါဒအရသိရသည်သို့ပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်ဖို့ဘာသာရပ်များမှာပေမည်။
ငါတို့ကဲ့သို့တိကျစွာတတ်နိုင်သမျှစတိုးဆိုင်မှာပေါ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရောင်အဆင်းနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြရန်တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုစေပြီ။ ကျနော်တို့မဆို color ကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာရဲ့ Display ကိုတိကျပါလိမ့်မည်အာမခံလို့မရပါဘူး။
ကျနော်တို့ကလက်ျာချန်ထားသော, ဒါပေမယ့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်, ပထဝီဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်န်ဆောင်မှုများ၏အရောင်းကန့်သတ်ခြင်း, တာဝန်ရှိသည်ကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကအမှု-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာဤညာဘက်လေ့ကျင့်ခန်းလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုဆက်ကပ်မဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများအားလုံးသည်ဖော်ပြချက်ကျွန်တော်တို့ကို၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာအသိပေးစာမပါဘဲအချိန်မရွေးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းခွင့်ရှိသည်။ တားမြစ်သည်ဘယ်မှာဒီ site ပေါ်တွင်လုပ်မဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုကမ်းလှမ်းမှုပျက်ပြယ်သည်။
အကြှနျုပျတို့သညျကဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရရှိသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများ, သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသည်သင်၏မျှော်လင့်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မည်ဟုခိုင်လုံသည်ဖြစ်စေ, ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုအမှားများကိုတညျ့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြပါဘူး။
အပိုင်း6- ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် ACCOUNT ကိုသတင်းအချက်အလက်တိ
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေရာမဆိုအမိန့်ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိ, အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးလျှင်သို့မဟုတ်အမိန့်နှုန်း, လူတစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူအရေအတွက်ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကန့်သတ်တူညီသောဖောက်သည်အကောင့်ဖြင့်သို့မဟုတ်အောက်မှာထားအမိန့်, တူညီတဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်, နှင့် / သို့မဟုတ်တူညီသောငွေတောင်းခံနှင့် / သို့မဟုတ်ရေကြောင်းလိပ်စာအသုံးပြုမိန့်ပါဝင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့နေတဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်သို့မဟုတ်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းအဖြစ်အပျက်အတွက်ကျနော်တို့က e-mail ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်အမိန့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ထိုအချိန်ကထောက်ပံ့ငွေတောင်းခံလိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်တစ်ဦးတည်းတရားစီရင်, ကုန်သည်တွေ, ပြန်လည်ရောင်းချသူများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ချထားခံရဖို့ပေါ်လာကြောင်းအမိန့်ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင်မှာလုပ်အားလုံးဝယ်ယူမှုများအတွက်လက်ရှိပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်ဝယ်ယူနှင့်အကောင့်အချက်အလက်များကိုသဘောတူသည်။ သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်ချက်ချင်း, သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲများအပါအဝင်, သင့်အကောင့်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ update လုပ်ဖို့သဘောတူသည်။
အပိုင်း7- ဆန္ဒရှိမှရွေးပါ Tools များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမဟုတ် input ကိုစောင့်ကြည့်မျှမရှိဘဲနေသောကျော် Third-party tools တွေကိုအသုံးပြုခွင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးစေခြင်းငှါ။
မဆိုမျိုးကိုမဆိုအာမခံ, ကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အခြေအနေများကိုမပါဘဲနှင့်မည်သည့်ထောက်ခံချက်မပါဘဲ "အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ" "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" နှင့်သင်ကအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သော tools တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးကြောင်းသဘောတူသည်။ ကျနော်တို့ကနေဖြစ်ပေါ်လာသို့မဟုတ် optional ကို Third-party tools တွေကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသမျှတို့ကိုအဘယ်သူမျှမတာဝန်ယူမှုရှိရလိမ့်မည်။
ထို site မှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့ optional ကို tools တွေကိုသင်အားဖြင့်မဆိုအသုံးသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်နှင့်သမ္မာသတိမှာလုံးဝဖြစ်ပြီးသင်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံနှင့် tools တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ Third-party ပံ့ပိုးပေးသူ (များ) ကထောက်ပံ့ပေးသည့်အပေါ်စည်းကမ်းချက်များ၏အတည်ပြုသင့်ပါသည်။
ငါတို့သည်လည်း, အနာဂတျမှာ, (အသစ်ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလွှတ်ပေးဖို့, အပါအဝငျ) ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အသစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ် features တွေကိုပူဇော်စေခြင်းငှါ။ ထိုကဲ့သို့သော features အသစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များအားဘာသာရပ်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
အပိုင်း 8 - third-party Links များ
ဒီ site ပေါ်တွင် third-party လင့်များကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်တဲ့ third-party ဝက်ဘ်ဆိုက်များရန်သင့်အားညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆန်းစစ်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ကျွန်တော်အာမခံမဆို Third-party ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် websites များအတွက်, သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများ, ထုတ်ကုန်, ဒါမှမဟုတ်တတိယပါတီန်ဆောင်မှုများအတွက်မဆိုတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တာဝနျရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများ, အရင်းအမြစ်များ, အကြောင်းအရာ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့် Third-party က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်စပ်. လုပ်မဆိုအခြားအရောင်းအများ၏ဝယ်ယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မရှိကြပေ။ တတိယပါတီရဲ့မူဝါဒနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သင်သည်မည်သည့်ငွေပေးငွေယူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမတိုင်မီသူတို့ကိုသင်နားလည်သေချာပါစေ။ တိုင်ကြားမှုများ, တောင်းဆိုမှုများ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, သို့မဟုတ် Third-party ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို Third-party ဖို့ညွှန်ကြားရပါမည်။
အပိုင်း9- အသုံးပြုသူမှတ်ချက်, တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အခြားသတင်းများတင်သွင်းခဲ့တဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမှာ, သင် (ဥပမာပြိုင်ပွဲ entries တွေကိုများအတွက်) အချို့သောတိကျတဲ့တင်ပြပေးပို့ခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုမပါဘဲသင်သည်စာတိုက်မေးလ်အသုံးပြုပုံအီးမေးလ်ဖြင့်, အွန်လိုင်းရှိမရှိ, ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်း, အကြံပေးချက်များ, အဆိုပြုချက်, အစီအစဉ်များ, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင် (စုပေါင်း, 'မှတ်ချက်များ'), သငျသညျဘာသာပြန်ဆို, ဖြန့်ဝေ, ထုတ်ဝေ, ကန့်သတ်, ပြင်ဆင်ရန်, မိတ္တူခြင်းမရှိဘဲ, မည်သည့်အချိန်တွင်ကျနော်တို့အကြောင်းသဘောတူမဟုတ်ရင်မဆိုအလတ်စားအတွက်သောသင်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုမှတ်ချက်များကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကြပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်မည်သည့်မှတ်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဘယ်သူမျှမတာဝန် (1) အရဖြစ်ရလိမ့်မည် မည်သည့်မှတ်ချက်များများအတွက်လျော်ကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ (2); သို့မဟုတ် (3) မည်သည့်မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်။
ကျနော်တို့ may, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတာဝန်ရန်, မော်နီတာ, ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်ငါတို့၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိဆုံးဖြတ်ရန်အကြောင်းအရာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဆိုပါတီရဲ့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, ဥပဒေမဲ့ထိုးစစ်, ခြိမ်းခြောက်, သရေဖျက်မှု, အသေရေဖျက်, ညစ်ညမ်း, ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တားမြစ်ခံရသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်နေကြသည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ။
သင်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, privacy ကို, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပိုင်ခွင့်အပါအဝင်မည်သည့် Third-party မဆိုပိုင်ခွင့်, ဖောက်ဖျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သငျသညျထပ်မံသင့်ရဲ့မှတ်ချက်သရေဖျက်မှုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဥပဒေမဲ့, ကြမ်းတမ်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းကိုမဆံ့, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စစ်ဆင်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းမည်သည့်ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသို့မဟုတ်အခြား malware ကိုမဆံ့မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သငျသညျ, မိစ္ဆာက e-mail လိပ်စာကိုသုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ဟန်ဆောင်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုမှတ်ချက်များ၏မူလအစအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှလှည့်ဖြားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျမဆိုငျသညျကိုလုပ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်နောက်တာဝန်ယူနှငျ့သငျဖွငျ့ posted ဆိုမှတ်ချက်များအဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်မည်သည့် Third-party ယူဆ။
အပိုင်း 10 - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ
အပိုင်း 11 - အမှား, တိ AND ပျက်ကွက်
ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်, စျေးနှုန်း, ပရိုမိုးရှင်းများ, ကမ်းလှမ်းမှု, ထုတ်ကုန်ရေကြောင်းစွဲချက်, အကူးအပြောင်းကာလအချိန်ရရှိမှုမှဆက်စပ်ခြင်းအလိုငှါအပွငျအဆငျအမှားအယွင်းများ, တိသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ပါရှိသည်သောဝန်ဆောင်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်ရှိပေမည်။ (သင်ကသင်၏အမိန့်တင်သွင်းခဲ့ကြပြီးနောက်အပါအဝင်) ညာဘက်ကိုမဆိုအမှားများကို, တိသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ပြင်ပေးရန်နှင့်လုပ်ငန်း၌ဖြစ်စေမည်သည့်ဆက်စပ် website တွင်မဆိုသတင်းအချက်အလက်ကြိုတင်အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်တိပါလျှင်အမိန့်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ် update လုပ်သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်ကျနော်တို့ချန်ထားသော ။
ကျနော်တို့ဥပဒေကလိုအပ်သောအဖြစ် မှလွဲ. သတင်းအချက်အလက်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်, န့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှု၌ဖြစ်စေမည်သည့်ဆက်စပ် website တွင်သတင်းအချက်အလက်, ကို update ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းရန်မတာဝန်ဆောင်ရွက်ရန်။ အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ထားသော update များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်း၌ဖြစ်စေမည်သည့်ဆက်စပ် website တွင်လျှောက်ထားရဲ့ Refresh ရက်စွဲ, လုပ်ငန်း၌ဖြစ်စေမည်သည့်ဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ် updated ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
အပိုင်း 12 - တားမြစ်ထားသောကိုအသုံးပြုသည်
ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထွက်သတ်မှတ်ထားအဖြစ်အခြားတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုအပြင်၌, သငျသညျထို site သို့မဟုတ်ယင်း၏အကြောင်းအရာ အသုံးပြု. မှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်: မည်သည့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောရည်ရွယ်ချက် (က), (ခ) လုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်အခြားသူများကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံရန်, (ဂ) မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, ဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်း, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, ဥပဒေများ, သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအထုံးကိုဖောက်ဖျက်ရန်, (ဃ) အပျေါမှာချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ရည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ရန်, (င), အလွဲသုံးမှု, စော်ကား, ထိခိုက်မှုနှောင့်ယှက်သိက္ခာကျ, ကဲ့ရဲ့ခြင်း, ကဲ့ရဲ့ရှု, ခြိမ်းခြောက်, ဒါမှမဟုတ်ကျား, မ, လိင်, ဘာသာရေး, လူမျိုးရေး, လူမျိုး, အသက်, အမျိုးသားရေးဇာစ်မြစ်, ဒါမှမဟုတ်မသန်မစွမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားရန်, (စ) အယူမှားသို့မဟုတ်အထင်မြင်မှားစေသောသတင်းအချက်အလက်များတင်ပြခြင်းငှါ၎င်း, ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်, အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကို၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်လမ်းများတွင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါလိမ့်မည်ဟုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ code ကိုမဆိုအခြားအမျိုးအစား upload သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ရန် (ဆ), တခြားသူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်ခြေရာခံဖို့ (ဇ), spam, phishing, pharm, ငာ, ပင့်ကူ, တွားဖို့ (ဈ), သို့မဟုတ်ခြစ်; မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ရည်ရွယ်ချက် (ည), လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်, အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်လုံခြုံရေး features တွေကိုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်ကျော်လွှားဖို့ဒါမှမဟုတ် (ဋ) ။ ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်တားမြစ်သည်အသုံးပြုမှုမဆိုချိုးဖောက်များအတွက်မည်သည့်ဆက်စပ် website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးရပ်ဆိုင်းခွင့်ရှိသည်။
အပိုင်း 13 - အာမခံ၏ Disclaimer; liabilities များ၏ကန့်သတ်
ကျွန်တော်တို့သည်အာမခံချက်ကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏အသုံးပြုမှု, မပြတ်မတောက်အချိန်မီ, လုံခြုံသို့မဟုတ်အမှား-အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခိုင်လုံပါဘူး။
သငျသညျဖော်ပြသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်သုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ထို service ကိုသင့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောအန္တရာယ်မှာကြောင်းသဘောတူသည်။ မည်သည့်မျိုးကိုမဆိုကိုယ်စားပြုမှု, အာမခံသို့မဟုတ်အခြေအနေများမရှိပဲ, သင့်အသုံးပြုရန် '' အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ '' ဖြစ်သကဲ့သို့ 'နှင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏အားလုံးထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ (အဖြစ်ဖော်ပြငါတို့အားဖြင့်ဖော်ပြထား မှလွဲ. ) တွေဟာထောက်ပံ့ပေး, အမြန်သို့မဟုတ်ဖြစ်စေ ကုန်သည်အားလုံးဆိုလိုအာမခံသို့မဟုတ်အခြေအနေများ, ကုန်သွယ်အရည်အသွေး, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်, ကြာရှည်ခံမှု, ခေါင်းစဉ်, နှင့် Non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးအပါအဝင်ဆိုလို။
၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ Intern များ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရသူများသည်မည်သည့်ထိခိုက်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ အရေးဆိုမှုသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်။ ၊ အမြတ်အစွန်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ အချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အလားတူထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဆက်စပ်မှုရှိသည့်အခြားမည်သည့်ပြောဆိုမှုများအတွက်မဆိုပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများရှိအမှားအယွင်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မည်သည့်ထိခိုက်မှုမဆိုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်တင်ထားသော၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်) မှမဆို ၄ င်းတို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းအကြံပေးလျှင်သော်လည်းကောင်းထိခိုက်ခြင်း။ အချို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည်ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်အကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုချန်လှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းများကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကန့်သတ်ထားရမည်။
အပိုင်း 14 - INDEMNIFICATION
အကျိုးတူပူးပေါင်းသူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားရည်ညွှန်းမှုဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဥပဒေသို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးများကိုသင်၏ချိုးဖောက်မှုကြောင့်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တတိယပါတီမှမဆိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေများ။
အပိုင်း 15 - ပြင်းထန်
ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်, ဥပဒေမဲ့ပျက်ပြယ်သို့မဟုတ်ရနိုင်ကြောင်းဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်မည်သို့ပင်ဆိုစေသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုပွညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိအတည်ပြုဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ရနိုင်ကြောင်းသောအဘို့ကိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမှပြတ်ခံရဖို့မှတ်ယူရမည် Service ကို, ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အခြားမည်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏သက်တမ်းနှင့်ဘက်တော်သားမထိခိုက်ရကြလိမ့်မည်။
အပိုင်း 16 - Terminator
ကြိုတင်ရပ်စဲယနေ့အထိမြှုတ်ပါတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် liabilities အားလုံးရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤသဘောတူညီချက်၏ရပ်စဲရှင်သန်ရကြလိမ့်မည်။
သင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေသဖြင့်ရပ်ဆိုင်းမဟုတ်လျှင်နှင့်သည်အထိဝန်ဆောင်မှုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုထိရောက်သောဖြစ်ကြ၏။ သင်မရှိတော့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်း, သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ site ကို အသုံးပြု. လည်းငြိမ်းသောအခါအကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားသဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုရပ်ဆိုင်းစေနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတရားသဖြင့်စီရင်၌သင်တို့ပျက်ကွက်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုသက်တမ်းသို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူလိုက်လျောရန်, ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ, ငါတို့သည်လည်းအသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်မှာဒီသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းစေခြင်းငှါသငျတို့ဖွင့်ကြောင့်အားလုံးပမာဏအဘို့အထိုက်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုသံသယ အကယ်. ရန်နှင့်ရပ်စဲ၏နေ့စွဲအပါအဝင်; နှင့် / သို့မဟုတ်အညီကျနော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ် သိ. ဆိုအစိတ်အပိုင်း) ရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်။
အပိုင်း 17 - တစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဤ site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအားရိုသေလေးစားမှုရှိကို posted ဆိုမူဝါဒများဒါမှမဟုတ် operating စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်နှင့်ငါတို့စပ်ကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်နှင့်နားလည်မှုပါဝငျနှင့်ဝန်ဆောင်မှုသင့်ရဲ့အသုံးအုပ်ချုပ်မဆိုကြိုတင်သို့မဟုတ်ခေတ်တစ်ခေတ်သဘောတူညီချက်များ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဆိုပြုချက် superseding , ပါးစပ်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားဖြစ်စေ, သင်နှင့်ငါတို့စပ်ကြား (အပါအဝင်, ဒါပေမယ့် of Service ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုကြိုတင်ဗားရှင်း, ကန့်သတ်မပါ) ။
အပိုင်း 18 - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှပေးသောသီးခြားသဘောတူညီချက်များ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Kichijoji Kita machi 1-5-15 Tokyo Tōkyō JP 1800001 ၏ဥပဒေများနှင့်အညီအုပ်ချုပ်ရမည်။
အပိုင်း 19 - ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုပြောင်းလဲ
သင်ဤစာမကျြနှာမှာမည်သည့်အချိန်တွင် of Service ကိုသတ်မှတ်ချက်များအရှိဆုံးလက်ရှိ version ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုကို update သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website မှ update များနှင့်အပြောင်းအလဲများတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုအစိတ်အပိုင်းကိုအစားထိုး, ငါတို့ဝါးသမ္မာသတိမှာညာဘက်ကိုချန်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများများအတွက်အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့၏ website စစ်ဆေးရန်သင်၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏ဤသတ်မှတ်ချက်များအားမည်သည့်အပြောင်းအလဲများကို၏ပို့စ်ကိုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှ access ကိုသူတို့အားအပြောင်းအလဲများလက်ခံမှုရှိပါသည်။
အပိုင်း 20 - ဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်များ
၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကို thekdom@gmail.com သို့ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သင့်သည်။